टोकियो ओलम्पिकः ६ स्वर्णसहित चीन शीर्ष स्थानमा कायमै ! « MNTVONLINE.COM
टोकियो ओलम्पिकः ६ स्वर्णसहित चीन शीर्ष स्थानमा कायमै !
नेपालबाट चार खेलमा पाँच खेलाडी टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी भएका छन् । तीमध्ये सुटिङकी कल्पना परियार र जुडोकी सोनिया भट्टले खेलिसकेकी छन् । दुवै जना पराजित भइसकेका छन् । परियारले महिला १० मिटर एयर राइफलमा तथा भट्टले महिला ४८ किलो तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् ।